कस्तो थियो त्यस बेलाको जनआन्दोलन ?
नेपालदृष्टि । जनआन्दोलन दिवस, ३० वर्षीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था हटाउन सुरु गरिएको जनआन्दोलन दिवसका रुपमा चैत २४ गतेलाई मान्ने गरिन्छ । कांग्रेस नेता गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा २०४६ साल चैत २४ गतेबाट जनआन्दोलन सुरु भएको थियो ।
यद्यपि चन्द नेतृत्व मन्त्रिमण्डल दुई दिनमात्रै टिक्यो । चैत २५ र २६ गते पनि देशभर आन्दोलन जारी रहेपछि राजा वीरेन्द्रमाथि राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढ्यो । त्यसपछि उनले आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलाए ।
जनआन्दोलनको भावना र मर्म बिर्संदै गएको आरोप खेप्ने राजनीतिक दलहरुले चैत २४ मा औपचारिक कार्यक्रम गर्नसमेत छाडेका छन् ।२०६२र६३ को जनआन्दोलनको सुरुवात पनि चैत २४ गते नै गरिएको थियो । यो आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गराएको थियो । -दृष्टि न्यूज
विस्तारै बर्षासँगै बाढीको बहव कमजोर ( आज बाटो कहाँ कहाँ अवरुद्ध)
आज विजया दशमीको महत्व (भिडियो सहित)
विश्वकप फुटबल २०१८, यस्तो रह्यो
कसरी हराए आश्रयगृहबाट ८ नेपाली महिला ?
अक्सिजन र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेलाई मात्र अस्पतालराख्ने